VaMuchauraya Vosungwa Zvakare neMhosva Ine Chekuita naVaNyarota
HARARE — Mutauriri weMDC inotungamirirwa naVMorgan Tsvangirai mudunhu reManicaland, VaPishai Muchauraya, vasungwa nemapurrisa neChishanu apo vange vari pamusangano wekuzeya mitemo inobata vatori venhau.
VaMuchauraya vasungwa apo vanga vari kupinda musangano wekomiti yeparamende inoona nezvekuburitswa kwemashoko iyo yanga ichezeya mitemo inombunyikidza vatori venhau.
VaMuchauraya vari kupomerwa mhosva yekutyisidzira VaAmos Kutiya, vanova kambeni maneja wemutori wenhau ane mukurumbira, uye vakavamba bepanhau reDaily News, VaGeoff Nyarota, avo vari kudawo kumirira Makoni South mudare reparamende.
Shamwari yaVaMuchauraya, VaProsper Mutseyami, uye vari mumiriri weMusikavanhu mudare reparamende, vanoti vaona VaMuchauraya vachitorwa nemapurisa ndokuendwa navo kukamba yemapurisa.
Gweta riri kumirira VaMuchauraya pamhosva yavari kupomerwa, VaPassmore Nyakureba, vanoti VaMuchauraya vari kupomerwa mhosva inonzi yakaparwa muna Kurume wegore rino.
VaNyakureba vanoti VaMuchauraya, avo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa, vakachengetedzwa muchitokisi chepaMutare Central Police.
Hazvisati zvazivikanwa kuti VaMuchauraya vachamiswa riini pamberi pedare. VaMuchauraya vari kupomerwa imwe mhosva zvakare yekutyisidzira nerufu VaNyarota, uye vakabvisiswa mari yechibatiso inoita zana remadhora kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo.
Zvichakadaro, musangano wekuvandudza kutorwa kwenhau unonzi wawirirana kuti pane mitemo inofanira kuvandudzwa, yakaita se Public Order and Security Act pamwe ne Official Secreta Act.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko, VaSettlement Chikwinya, vanoti kuvandudzwa kwemitemo iyi kunofanirwa kuitwa kuitira kuti vatori venhau vashande zvakasunguka uye kuti veruzhinji vawane mashoko anovabatsira mukugara kwavo.
Komishina weZimbabwe Media Commission, VaMatthew Takaona, vanotiwo kugadziriswa kwemitemo iyi kuri kuitika nguva yakanaka apo nyika ichangobva kupasisa bumbiro idzva remitemo yenyika.
Nyanzvi munyaya dzekutorwa kwenhau, VaRshweat Mukundu, vanotiwo munyika munofanirwa kunge mune nhepfenyuro dzakawanda kuitira kurerutsa nyaya yekuti vagari vasamhanyire kuteerera zvekunze.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira ari maMutare, Clayton Masekesa , anoti anotambira nemufaro chinangwa uye gwara riri kuitwa nekomiti yeparamende sezvo zvichipa kuti vakwanise kushanda zvakanaka.
Musangano uyu wapindwa nevatori venhau vane chitsama, pamwe nenhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvekuburitswa kwemashoko.